Bannaanka Shiinaha ee banaanka ayaa loo soo saaray nuujinta alaabada wax soo saarka iyo alaabada | Zhengcheng
Gudiga looxa ee loo adeegsado sameynta boodhadhka ayaa leh midab buuxa, gudbinta iftiinka sare, iyo tuubada loo yaqaan 'LED patenti' oo leh dhalaal sare. Sawir muuqaal qurux badan ayaa soo jiidan kara dareenka macaamiisha mustaqbalka.
Magaca badeecada: Boodhadh bannaanka hogaamiya oo iftiiminaya
Codsi: Dukaan ku habboon, dukaan kafeega, dukaan keega, supermarket
1. Waxaan nahay soo saare calaamadaha sanduuqa nalka. Warshadda ayaa baaxadeedu dhan tahay 4,200 mitir murabac ah. Waxaan ku takhasusay soo saarista calaamadaha albaabbada. Waxaan khibrad hodan u leenahay wax soo saar iyo wax soo saar. Intaas waxaa sii dheer, ma jiro dhexdhexaadiye kasbanaya guddiyo. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa qiimaha ugu fiican.
2. Xaashida looxa loo yaqaan 'acrylic sheet' ee aan isticmaalno waa Mitsubishi acrylic sheet oo laga keenay Japan si loo hubiyo in tayada badeecaddu gabi ahaanba tahay mid tayo sare leh. Wax soo saarkayagu ma xumaan doonaan ama ma yarayn doonaan ka dib 3-5 sano oo la isticmaalayay.
3. Sanduuqa fudud ee Zhengcheng wuxuu qaataa naqshad qaabaysan, jirka sanduuqa waa la shaabadeeyey, gebi ahaanba biyuhu ma taabtaan, mana saameyn doono isticmaalka tuubada leedhka leh.
Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co., Ltd. waa soo saare ku takhasusay sanaadiiqda iftiinka tamarta keydinta ee calaamadeynta dukaamada ku habboon, dukaamada waaweyn, dukaanka farmashiyaha, raashinka. Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay heshay 4 shatiyado qaran ah oo ku habboon warshadaha wax soo saarka sanduuqa fudud. Shirkadeenu waxay leedahay warshad xirfad leh oo leh aag 4200 mitir murabac ah iyo 4 sanduuq fudud oo samaysanaya xariiqyo wax soo saar. Zhengcheng wuxuu hadda u adeegaa in ka badan 100 magac oo Shiinaha ah wuxuuna soo saaraa qiyaastii 30,000 oo mitir oo sanduuqyo iftiin oo tamar-badbaadin ah sanad walba ah.
Hore: Dukaanka dukaamada waaweyn
Xiga: Calaamadaha sanduuqa nalka tamarta badbaadiya ee loo yaqaan 'Acrylic ads'
3d Boodhadhka Iftiimiya
Bananka Banaanka Iftiimiya
Saxeexa Raashinka oo Iftiimiyay
Saxeex iftiin leh
Calaamadaha Iftiiminaya, Calaamadaha Xayeysiinta, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Saxeex Farmashiyaha,